Labo Qarax oo aad u xoogan kana dhacay wadada Maka Al mukarama oo sababay dhimasho iyo dhaawac – Walaal24 Newss
Labo Qarax oo aad u xoogan ayaa ka dhacay wadada Maka Al mukarama ee magaalada Muqdisho oo sababay dhimasho, dhaawac isugu jira iyo burbur hantiyadeed, in kastoo wali laga maqlayo qaraxyo kale isl goobta.
Ayadoo ay jirto saacadba saacada ka danbeysa in uu sii kordhaya qasaaraha ka dhashay weerarkii kooxda Al-Shabaab xalay ku qaadeen hotelka Maka Al-Mukarama iyo daaro kale oo ka agdhow oo ay ku dhinteen in ka badan 30 ruux halka tiro 60 ka badan ay ku dhaawacmeen.
Saraakiisha laamaha caafimaadka ayaa saacadihii ugu danbeeyay ka qaaday goobta dad qaba dhaawacyo kala duwan iyo meydad laga soo saaray dhismayaasha ku yaal xarumaha Ganacsi ee ku dhow goobta, dhanka kale dab xoogan ka kacay halkii uu qarxa ka dhacay oo ay ku gubteen dhismayaal Ganacsi nooc walba ley
Dhanka kale waxà laga cabsi qabaa in dad badan ay ku hoos jiraan gudaha dhismayaasha burburay ee ku yaal goobta oo uu ka mid yahay hotelka Maka Al-Mukarama.
Qaraxyada iyo weerarka xalay ka dhacay wadadaaan ayaa noqonaya kii ugu qasàraha badnaa ee ka dhaca magaalada Muqdisho, marka laga reebo kii Hotel Shaamow, Hargaha, saamaha iyo Isgoyska Soobe (Afar iyo tobanka Oktoobar).
Rasaas iyo Qaraxyo ayaa wali laga maqlayaa hoteelka Maka al Mukarama oo xalay fiidkii lagu qaaday weerar is qarxin ah, ka dibna rag hubaysan ay galeen.
Laamaha ammaanka ayaa iyo dadkii weerarka soo qaaday ayaa wali rasaas is waydaarsanaya.
Al Shabaab ayaa qaraxyo iyo weerarro ay dad badan ku dhintaan ka gaysta magaalada Muqdisho, ayaadoo ay jiri karaan gacmo kale.
Xukuumadda Soomaaliya oo cambaareysay falkii foosha xumaa ee lagula kacay marxuumad Caa’isho
Tababar ku saabsanaa Xoojinta isku xirka Howlaha Taliska Guud ee Ciidanka Xoogga oo la soo xiray
Ra’iisul Wasaare Khayre oo kormeer ku tagay dhismayaal ay Booliisku Is-xilqaan ku dhisayaan